Booqashadii Daahir Riyaale ku arki lahaa Tony Blair ma tii C/hi Yuusuf George Bush ku arki lahaa 2002 baa
Anagoo galab dhex fadhina dugsigii “Allaahida” 1986 mar la yiri waxaad qaadanaysaan koorso Ingiriis ah si aad ugu biirtaan Kulliyadda Waxbarashada ee Lafoole iyadoo buuggii naloo dhigi jiray la oran jiray Kooshin ayaa anagoo seddex arday ah, labo wiil iyo gabar dhexda noo fadhida waxay gabadhii soo bixisay sawir Nairobi ay iska soo qaaday mar ay halkaas caafimaad u tagtay. Sawirkaas halkii laga soo qaaday oon mar dambe arkay waxaa ka muuqday Uhuru Park iyo saraha dhaadheer ee dhinacyada ka xiga. Waxaan shaki ku jirin in halkaasi tahay meel qurux badan gaar ahaan xilliga uu cawsku si fiican u baxo.
Nairobi: Uhuru Park
Gabadhii wiilkii dhinaca kale fadhiyey bay ku tiri arag anoo Maraykan jooga! Wiilkii wuxuu ka bixi waayey hambalyeyn iyo isagoo ku sheegay inay ilbax tahay. Aniga laftayda markaan sawirka indhaha ku dhuftay iyadoo ninkaasi hayo ma beenaysan waxay sheegtay laakiin hadal iyo hambalyo igama tegin waxaanse ku fakaday gabadhii baa inta afka ii soo dhawaysay tiri waa Nairobi ee ka aamus. Wiilkii sidii buu run u qaatay. Gabadha waqtigaas deris baan ahayn marka waxaan garan waayey waxay iigu eexatay. Ma darisnimadaa mise waxay is tiri ninkaas ciddiisaa dowladda mucaarad ku ah marka Kenya iyo Itoobiya annagaa uga fara-dhuudhuuban?
Waxaa sidoo kale jiray in dhallinyaro Soomaaliyeed oo Canada iyo Maraykan tagay ay sideetameeyadii dabayaaqadeedii ama sagaashameeyadii bilowgeedii inta Soomaaliya ama waddamada deriskaa tagaan tusa sawir iyaga ah iyo sanam leh suuraddii Roland Reagen dabadeedna dadka ku dhaha waxaan qaabilnay oon salaannay Reagan laakiin waxaanan weli fahmin sida dadku ukala garanwaayeen sawirka runta ah iyo kaas. Haddaad dibad cabsan tahay waxaa laga yaabaa in markaas ay maskaxdaada wax kale ka guuxayaan.
Marka shukaansiga laga hadlayo harowsiga iyo beentu waa iska caadi haddii aad hadafkaaga ku guulaysatid oo ah soo xerogelin. Xasuuso maahmaahdii ahayd: dumar been kusoo xero geli runna ku dhaq. Arrintan siyaasad ahaan ma loo isticmaali karaa?
Bilowgii sanadkii 2002 waxaa taageerayaasha C/hi na barayeen inuu odayga casuumad ka helay madaxweyne Bush oo uu dhinaca ka istaagi doono xafladda sanad-guuradii koowaad ee ka soo wareegaysay qaraxyadii Maraykanka ka dhacay. Waxaa boggaggooda iyo saxaafada taageertaa si sheex la’aan ah u baahiyeen arrintaas. Xitaa waxay dhaheen waxaa garoonka ku soo dhawaynaya saraakiil sarsare oo ka socota wasaaradda arrimaha dibadda. Waxaa jiray dooddo loo daleelay arrintaas darteed, anigu halkaas baan ku saadaaliyey inay khiyaali tahay. Ilaa hadda booqashadaas waa la sugayaa.
Sidoo kale waxaa maalmo dhexe internetka lala ordayey in Daahir Riyaale iyo wafti balaaran ay marti u ahaan doonaan Tony Blair, maamulkiisa iyo waliba xubno baarlamaan oo kale. Waxaa la sheegay in 17/03/04 uu sarta baarlamaanka ku qaban doono hadal sidoo kalana uu arki doono ra’iisul wasaaraha iyo madax sare. Sidii aanan ugu degdegin ka hadalkii sawirka gabadhii ayaan qaatay inaanan sugo inta waqtigaas ay weriyayaal iyo qorayaal uusan wejigoodu nagu cusbayn sheegeen la gaarayo.
Haddii arrinta goosashada xaggeeda la fiiriyo, xitaa haddii Riyaale uu qarsoodi ku arko Tony Blair wax micno ah oo buuran ma leh maxaa yeelay waxaa isaga dani ugu jirtaa in la isla sawiro labadooda dabadeedna qofkii rabaa wuu oran karaa wuxuu ka la hadlay aqoonsiga Somaliland. Waxa arrintaas beeni kara oo kaliya labadooda waa haddii la isla sawiro.
Qofkii kala yaqaan dadka Soomaaliyeed waxaan shaki ka galayn Soomaalinimada madaxda ugu sarsaraysa Somaliland intooda badan laakiin maxaa waalay waftigaas? Maxay beenta laga qorayo u diidi waayeen? Ani ahaan waxaan aamminsanahay in wefdigaasi la khalday ama ay na khaldayaan oo soo qaraab tageen. Marka sidee lagu khaldi karaa? Waxaa suurtogal ah seddex waxyaalood:
1. Shaf u garaacii xubno baarlamaan oon culays lahayn “backbenchers”.
2. Balag ay luleen qurbo-jooga reer Waqooyiga.
3. Iyo haweenay arrintaas garqaad ka ah.
Labada qodob oo hore waa iska caddahay laakiin waxaan ka cududaaranayaa inaan ka hadlo dumarka iyo hooyooyinka laakiin ka hadalka marwooyinka “wuxuu noo egyahay marka bakhtiga naloo banneeyey (daruuro) waxaana nooga bannaan inta bakhtiga nooga bannaan (in yar)” marka haddii laga maarmiwaayo waa laga hadlaa. Sida ragguba qaar khaldan u leeyihiin waxaad arkaysaa dumar sidoo kale khaldan laakiin dumarku mar kasta ka naxariis badan ragga, taasna waa arrin fidrada iyo diinta lagu ogaaday.
Waxaa walaasheen Edna Aadan laga sheegay inay tiri dadka reer Koonfurka isku asal ma nihin! Yaa arkay wax tusinaya in dadka Hargeysa ku dhashay ay kuwa Garoowe ama Marka ka nasabsanyihiin? Haddaad suugaanta fiirisid ma arkaysid wax sheekadaas ka jira.
Horta Soomaalidu badanaa wax makala saarto. Dumarka hooyadu ka mid tahay oo naxariistii dabiiciga ahayd leh warkooda iyo taladooda waa la qaadanayaa sidii Nabi Muxamedba (SCW) uu u qaatay taladii Umu Salama (RC). Laakiin haddii dumarku isku dayaan inay ka hadlaan arrimo aan waaqici ahayn oo khaldan waa inaan taladooda la yeelin. Ninkii taladaas khaldan qaatana waxaa horay uga maahmaahay Soomaalida oo tiri: rati rati wado iyo nin naagi waddo midna kaama leexdo. Marka aqoonsiga Somaliland laga hadlayo waxaa garwadeen ah marwadaas waana taas halkaas Riyaale iyo waftigiisii ku furtay. Marka la yaab ma leh inaad aragtid Edna oo sheeganaysa inay naga nasab fiicantahay.
Malaga yaabaa in Tony Blair arko Riyaale? Haddii Tony Blair ku socda indho-adaygiisii uu Ciraaq ku weeraray oo kale waa suurtagal sidoo kale waa suurtogal inuu qarsoodi ku arko laakiin waxaan shaki ku jirin inay taasi dan ugu jirin Tony Blair. Sabab? Tony Blair waxaa cusleeyey dhibaatadii Ciraaq iyo garab-istaagii Bush. Sumcaddiisii ayaa dhacday oo dhulka gashay marka suurtogal ma ahan in isagoo qarash shirka dib-u-heshiisiinta Kenya wax ka bixinaya uu yiraahdo waxaan Riyaale u qaabilayaa madaxweyne.
Hoolasha Westminster ka hadalkiis wax micnaa oo saas ah ma leh laakiin haddii ra’iisul wasaaruhu joogay waa arrin kale. Waxaa shirar ku qabsado ururro Soomaliyeed oo London jooga iyadooy fadhiga soo xaadiraan xubno ka socda baarlamaanka Britian, qaarkoodna yihiin kuwa xibsiga talada haya, jagana ka haya dowladda. Marka sidii sawirkii Reagan haddii hoolkaas tegidiisu Daahir iyo waftigiisa wax u tarayso, dadka BBC-da laanteeda Afsoomaaliga ka dhagaystana looga dhigo horumar weyn, hala arko.
Dad faallo ka bixinayey kulankaas oo boggagga Soomaaliyeed kusoo qoray waxay sheegeen in wafdigaasu soo xigtay hadalo ay horay u dhaheen dad Ingiriisa oo hore oo ay ku jireen Margaret Tatcher iyo Churchill. Caqligu wuxuu keeni lahaa inay soo xigtaan waxii George Bush, aabbihiis, Reagan iyo Clinton dhaheen! Reer Waqooyigu ma garan waayeen markay ka hadlayeen qarnigii 13-aad ama 17-naad inuusan Maraykanku wax la xuso ahayn ama aysan dadkii Yurubka ahaa halkaas tegin? Markii Ingiriisku xudduudaha samaynayey ama adduunka gumaysanayey, isagaa horboodayey laakiin taasi waxay ahayd taariikh. Marka waa Maraykan inay raaligeshaan oo taariikhdooda iyo oraahahooda xusaan.
Marka qolada kaabooyga ah (cowboy) oo Waqooyi Galbeed siin karta “good”, Puntlandna “bad”, Xamarna “evil” waa Maraykan. Marka maad George Bush fiirisaan isagaa idin oran haddaad reer Waqooyi tihiin ku darsada Gaarisa isagoo Garoowe u qaba. Waxaana isaga khaldami kara gobolka hadda la yiraahdo Waqooyi Bari Kenya iyo Waqooyi Bari Soomaaliya.
Hor Ilaahay haddii loo hadlo waxaan la inkiri karin horumarka hadda ka jira Waqooyi Galbeed. Daahir Riyaale cidna xoog kuma qabsan waloow wax la sheegsheego haddana waakaas dad taageeraya Waqooyi Galbeed soo dhaweeyeen halka hogaamiyaha Puntland uu dadka ka dhuunto markuu London yimaado.
Sidii horay loo yiri: sammaanteediyo xumaanteed Soomaaliya Soomaali baa leh.
Faafin: SomaliTalk.com |March 19, 2004